Toriteny Alahady 09 Jona 2013 | FJKM Amboniloha
Toriteny Alahady 09 Jona 2013
Matio 19 : 16-29
Alahady natokana hitondrana am-bavaka ny Mpampianatra sy ny Mpandraharaha Sekoly SEDERA Amboniloha
Tantaran’ny zatovolahy anankiray ao anatin’ny tanjaka, hery, fahefana, voninahitra nefa manana olana goavana ara-panahy, ka manontany ny hoe : Mpampianatra ô!
« Inona no tsara ataoko mba ahaozako ny Fiainana mandrakizay ? »
Moa tsy mampangetaheta antsika koa va ny hahafantatra izany zava-miafina izany ?
Indro atolotry ny Tenin’Andriamanitra antsika ireo zavatra 3 andrasany amiko sy aminao mba ho isan’izay handova ny fiainana mandrakizay isika :
1- Mitandrina ny didin’Andriamanitra and 18-19 (tsindrina manokana ny didy 10)
Ny Soratra Masina ihany no fanalahidy ahatrarana izany tanjona izany. Atao ho zava-dehibe ny fandinihana ny Tenin’Andriamanitra ka misy Finagonana kely 2 ato amintsika FJKM , ny voalohany dia ny :
Tokantrano : izany hoe Fiangonana kely miara-mandinika ny Soratra Masina , miafampizara ny mofon’aina vakina isan’andro , natao ho an’ny mpianakavy
Fiangonana : natao ivorian’ny tokantrano tsirairay , ao no hanangonan’Andriamanitra ny mino rehetra ka hitenenany , hanambarany ny vaovao mahafaly sy hampaherezany ireo izay efa trotraky ny adin-tsaina .
2- Fanatanterahana izay lazain’ny tenin’Andriamanitra eo amin’ny fiainana. And 21
« Amidio ny fananao , ka omeo ny malahelo »
Mbola aretina mikiky antsika koa ny tsy fahafoizana indindra ny lafiny ara-bola . Tsara ho fantatra anefa fa tsy azo vidina vola ny fiainana mandrakizay . Ny tantara eto dia mampiharihary hatrany am-boalohany fa tsy misy mahory an’ity tovolahy ity na harena , na fahefana , na fanapahana afa-tsy zavatra iray loha ihany dia ny olana goavana ara-panahy , tsy manam-piadanana , tsy manam-pitsaharana ny fanahiny. Tsarovy ry havana fa ny harena tsy natao ahazoana ny fiainana mandrakizay fa natolotr’Andriamanitra ireny mba hanaporofoiny fa tena mikarakara antsika Izy . Manamarina koa izany fa tsy izay manan-karena akory no handova ny Fanjakan’ny Lanitra . Na toy inona na toy inona toerana nametrahan’Andriamanitra antsika eo anivon’ny Fiaraha-monina sy ny asa , tsy maintsy mandohalika isika manoloana ny voninahitr’Andriamanitra , mariky ny fanetren-tena sy fanekena ny fahelebiazan’Andriamanitra , Ilay manana fahefana hanary amin’ny helo na hampandova ny fiainana mandrakizay .
Fitiavan-karena = sakana tsy hidirana amin’ny Fanjakan’ny Lanitra
3- Hoy Jesoa : Manaraha Ahy
Mariky ny fitiavana sy ny fanekena an’i Jesoa ka vonona ny hahafoy ny zavatra rehetra eto amin’ity izao tontolo izao ity. Fanarahana ary fankatoavana tsy misy fepetra no napetrak’i Jesoa .
Miantefa amintsika izany Tenin’Andriamanitra izany , mba efa nanonatany ny Tompo ve ianao nanao hoe : « Jeso ô ! : Inona no tsara tokony hataoko ahazoako ny fiainana mandrakizay ?
Mety efa nanontany ianao , mety mbola tsy nanao izany koa , tsarovy fa ny Andriamanitra ivavahantsika dia Andriamanitra mihevitra ny mahasoa antsika na mbola tsy mangataka akory aza isika , nomeny anao manokana ity teny ity mba ahafahantsika miomana sahady ny amin’izay tokony hatao hidirana amin’izany fianana Mandrakizay izany . Diniho ny Soratra Masina ao an-tokantrano, aza mahafoy ny fiaraha-mivavaka aty am-piangonana, ary aoka tsy ho amin’ny fitiavan-karena ny fontsika, rehefa tanterakao izany dia Maneke hanaraka ny Tompo, izay ny fanalahidy handovantsika ny Fianana mandrakizay.
Ho an’Andriamanitra irery ihany ny voninahitra .
RAKOTOARIMANANA Milson , Mpitandrina
Catégories :	Toriteny	/ par AnjGab 10 juin 2013